SERASERA, TENY MALAGASY: 14/02/11 - rov@higa
SERASERA, TENY MALAGASY: 14/02/11
14 Février 2011, 21:43pm
Tiako i Madagasikara Manomboka manetsiketsika ny fototra
Voaporofon’ny boriborintany faha-III eto Antananarivo Renivohitra tamin’ny lanonam-pifampiarahabana nahatratra ny taona 2011 tamin’ny sabotsy teo, tetsy Ampandrana, fa velona ary manana ny maha izy azy ny antoko Tiako i Madagasikara miaraka amin’ny Filoha Marc Ravalomanana.
Hita taratra teo amin’ny fahamaroan’ny mpikatroka sy ny vahiny tonga tao izany, izay nifanohana eny hatramin’ny fikarakarana rehetra. Nanome voninahitra ny fihaonana i Fetison Rakoto Andrianirina, niarahaba sy nampahery ireo voatendry hiantsoroka ny … (Suivre le lien)
Pasitera Edouard Tsarahame “Tsy hampangina anay ny sazy mihantona”
Nanamarika ny hetsika tamin’ny sabotsy tao amin’ny Magro ny fandraisam-pitenenana sy fijoroana vavolombelona nataon’ireo gadra politika isany, Zafilahy Stanislas sy pasitera Edouard Tsarahame.
“Nezahina nampanginina izahay fa tantara vaovao no hosoratana”, hoy ity farany, izay nilaza fa “namita iraka izahay tany. Avelao ny sazy ihantona fa tsy hampangina anay izany. Raha tsy mahay mifamela kosa dia tsy handroso mihitsy i Madagasikara ka izay no ilaina ny fampihavanam-pirenena”. Raha nandray fitenenana kosa i Olivier Rakotovazaha dia nanao fanamarihana fa “izao tontolo izao no nahita fanonganam-panjakana teto. Milahatra anefa ankehitriny ny OIF sy ny COI izay … (Suivre le lien)
Ampamoakan’ny Pr Zafy Ho avy indray ny manaraka
Tsy mbola nisy ny valin-kafatra mazava avy amin’ny mpitondra ankehitriny mikasika ny ampamoaka sy ilay taratasy misokatra nataon’ny profesora Zafy Albert.
Resaka “bois de rose” sy ny raharaha nahafatesan’olona ny 26 janoary sy ny 7 febroary 2009 moa izy io. Atoa isany Andry Rajoelina, filohan’ny Fahefana Avon’ny Tetezamita sy Camille Vital, praiministra, no tena voatonontonona ao anatin’ity resaka ity. Mandeha ary ny resaka amin’izao fotoana fa ho avy indray ny tapany faharoa amin’ity ampamoakan’ny profesora Zafy ity, ary mety ho amin’ity herinandro vaovao ity no hitrangan’izany, manoloana ny tsy … (Suivre le lien)
Ing Radanoara Julien
«Tsy hisy fankatoavana avy any ivelany raha tsy misy fiaraha-mitantana»
Tsy mitsahatra mivoatra ankehitriny ny fizotry ny raharaham-pirenena. Eo am-piandrasana ny fiverenan’ny dokotera Leonardo Simao mikasika ilay sori-dalana izay natolony dia maro indray tato ho ato ireo fikambanana vahiny tonga, milaza hanara-maso ny resaka fikarakarana ny fifidianana eto amintsika. “Tsy hisy velively ny fankatoavana iraisam-pirenena, raha tsy misy ny fiaraha- mitantan’ny ankolafy rehetra, ny fikarakarana ny fifidianana” hoy Ing.Radanoara Julien raha nilaza ny fahitany ny toe-draharaham-pirenena ny tenany. Nambarany fa “ raha hiazakazaka hanao fifidianana ny … (Suivre le lien)
Tsara fa ambinin-doza
ity no antoka hanomezana ilay fanomezana fankatoavana avy amin’ireo sehatra iraisam-pirenena a ! ». Izany no fomba hifandresen-dahatra amin’ity resaka mandany jiro mampihodikodina am-pitoerana ireto mpanao politika Gasy ireto. Tsy dia azo antoka loatra izay mety haterak’ilay taratasy fa tetika an-dalana no betsaka. Izay manao sonia dia ho tafiditra ao anatin’ny fitondrana sy ny fitantanana ny tetezamita. Mahatsapa izany fitsambikina-mikimpy ataony izany ve ny mpanao politikantsika? Fantany tsara ve ny zavatra resahany? Izay vokatry ny soniany ve mba hahatonga azy ho tompon’antoka? Aiza ho aiza izay ho … (Suivre le lien)
Fiainam-pirenena: Mila tairina ve vao… ?
Mila tairina ve vao… ?Raivobe Soa fa teo ny filohan’ny fahefana avon’ny tetezamita. Soa fa nahatsiaro tena izy ka nahay nanaitra ny tompon’andraikitra sy manan-pahefana tsy nahalala ny tokony nataony. Fa toy ny inona moa ny olona tokony hapetraka eo amin’ny sezan’ny minisitra e ? Raha havadika ny fanontaniana, tokony ho inona no ao an-tsain’izay manam-pahefana hapetraka na hipetraka eo amin’ny sezana minisitra ?
Mpanatanteraka izy Natetezamita na Repoblika mijoro ara-dalàna, mpanatanteraka ny tetikasam- panjakana no anjara asan’ny mini s i t ra. N’ iza n’iza, ary na departemanta inona na inona no iandraiketany. Eny tokoa, manana andraikitra izy. Dia andraikitra mpanatanteraka ny … (Suivre le lien)
Arema: Fihetsiketsehana telo no notanterahany ny faran'ny herinandro.
Tetsy amin'ny Carlton tetsy Anosy ny sabotsy faha-12 febroary teo no notanterahin'ny vehivavy arema sy ny mpiandraikitra ny ankanin-jaza, ary ireo vehivavy mpomba ny amiraly Didier Ratsiraka ny fampiarahabana ny asaramanitra azy ireo. Nitarika ireto vehivavy ireto ramatoa Ramisandrazana Rakotosoa sy Ramatoa Rôbiarivony Josiane. Nisy koa ny solontena avy any amin'ny vehivavy Arema tamin'ny faritany enina. Olona miisa 280 no nanatrika ity fihaonana ity. Marihina fa tao anatin'ny taona maro izao dia sambany indray no nifoha tamin'ny torimasony ireto vehivavy mpomba ny Amiraly Didier Ratsiraka ireto ka nivory toa izao.
Tany Fandriana koa dia nifamory ny Arema tao … (Suivre le lien)